‘हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा र कृषि हो ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा र कृषि हो ’
‘हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा र कृषि हो ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता June 27, 2018	0 155 Views
अध्यक्ष– गढवा गाउँपालिका
नया आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय सरकारहरुले नया नीति तथा कार्यक्रम र बजे ट ल्याएका छन् । कसै ले भौ तिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने के हीले कृषिलाई । कतिपयले शिक्षा नै विकासको पहिलो आधार हो भन्दै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे का छन् । स् थानीय सरकारले आफ्नो ठाउ, क्षे त्र, सम्भावना, आवश्यकतालाई हे रे र बजे टको प्राथमिकता निर्धारण गरे का छन् । यसै सन्दर्भमा गढवा गाउपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले नया बजे ट र प्राथमिकता तथा हालसम्मको कार्यप्रगतिका विषयमा केन्द्रित रहेर गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
वर्षदिनको कार्यकालमा प्रगति के छन् ?
निर्वाचित भइसके पछि जनताको काम व्यवस् िथत गनेर् सिलसिलामा सबै भन्दा पहिले कार्यालय व्यवस् िथत गर्नुपनेर् थियो  । गाउ“पालिका भवन व्यवस् िथत गनेर् काम भयो र जनतासग अझै नजिकको निकाय वडा कार्यालय भएकाले वडा कार्यालय व्यवस् थापनको काम पनि आफ्नै हिसाबले गरे का छौ ं । अलिकति हामीलाई समस् या पनि भयो  । वडा सचिव सबै ठाउमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यसको व्यवस् थापन हामीले गाउ“पालिकाकै कर्मचारीहरुलाई खटाएर कामकाजलाई सहज बनाएका छौ ं । मुख्य समस् या भने को वडा नं. ८ को इलाबासमा पे श्की रकम दिन नमिल्ने भएकाले थप समस् या भएको छ । वडा नं. ८, ५, २, ७ मा सचिवको समस् या भएको छ । सचिवका रुपमा ले खापाललगायतका कर्मचारीलाई पठाउनुपनेर् भएकाले समस् या भएको छ । पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस् थापनको काम भयो  । नियमित गाउ“सभा गरे र ल्याइएका यो जनाहरुको कार्यान्वयनमा लागे का छौ ं । अहिले ६० प्रतिशत भुक्तानी भइसके को अवस्था छ । के ही यो जनाका काम भए पनि भुक्तानीको प्रक्रिया चलिरहे को छ । भुक्तानीका लागि पनि ले खाको समस् या दे खिएको छ । छिटो छरितो भुक्तानीका लागि प्रयास थाले का छौ ं ।
असारे विकास हटाउन सकिएन है ?
हाम्रो मा यस् तो छै न । हाम्रो मा धे रै काम सम्पन्न भइसके को अवस् था छ । जस् तो गाउ“पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको छ । तीनवटा गाडेर् नको पनि डिपिआर निर्माण भएको छ । यीबाहे क उपभो क्ताबाट हुने काम हामीले चै त–वै शाखमै सके का छौ ं । भुक्तानीको काम मात्रै कर्मचारी अभावमा अलि ढिलाइ भएको छ । सानातिना थो रै काम बा“की हो लान् । नत्र असारमै विकासे काम गनेर् पुरानो प्रचलन यसपालि हामीले धे रै हदसम्म अन्त्य गरे को अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधि आउदा कार्यशै लीमा फरकपन आउनुपर्ने हो इन र ?
हो , फरकपन आएको छ । जस् तो गढवा गाउ“पालिकाका दुईवटा यो जना ५०/५० लाख बजे टका कालो पत्रे गनेर् काम हामीले समयमै सके का छौ ं । सुधारो न्मुख अवस् था छ । पहिले असारमै विकासे काम शुरु गनेर् प्रवृत्ति थियो भने अब असारमा भुक्तानी गनेर् र के ही काम सम्पन्न गनेर् अवस् थामा आउनु भने को त सुधार भएको मान्नु प¥यो नि । लामो समयपछि त्यो पनि फे रिएको संरचनासहित हामी आएका थियौ ं । पहिलो वर्ष हामीमा पनि के ही अनुभवको कमी भयो हो ला । तर जनताले के ही न के ही हिजो भन्दा आज फरक पाएका छन् । जस् तो गत वर्ष टुक्रे यो जना आए । काम गर्न समस् या आयो । यसपालिदे खि हामीलाई अनुभव पनि भयो । अब कम्तिमा पा“च लाख भन्दा मुनिका यो जना हामीले ल्याएका छै नौ ं ।
तर ती यो जना कार्यान्वयनका लागि उपभो क्ता समितिमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे हाले भन्ने सुनिन्छ नि ?
यसलाई रो क्ने प्रयास मै ले गरिरहे को छु । सो ही अनुरुप एउटा वडालाई चारवटा क्लष्टरमा बा“डे का छौ ं । प्रत्ये क क्लष्टरमा वडा सदस् यहरुलाई जिम्मा दिइएको छ । वडा सदस् यकै अध्यक्षतामा भे ला आयो जना गनेर् र वडाध्यक्ष त्यसको प्रमुख अतिथि भएर आमभे लाले जसलाई उपभो क्ता समितिको जिम्मा लगाउ“छन् त्यसमा जनप्रतिनिधिको हस् तक्षे प नहुने , उपभो क्ताहरुले नै चुने का मान्छे हरुलाई समितिमा ल्याउने परिपाटीको विकास हामीले गरिसके का छौ ं । यति हु“दाहु“दै पनि तपाइ“ले भने जस् तै गुनासा आएका छन् । मलाई के लाग्छ भने जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको मात्रै हो इन । ऊ साझा हो र हामीले साझा व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अध्यक्षको हिसाबले मै ले यो व्यवहारलाई अवलम्बन गरे रै अघि बढे को छु । त्यस् तै वडाध्यक्षहरुले पनि व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । अकोर् कुरा के छ भने हामी चुनाव लडे र आएका छौ ं । चुनावमा हारे का साथीहरुले भे लामा नआउने र विरो धका लागि विरो ध गनेर् परिपाटी पनि मै ले दे खे को छु र के ही वडा अध्यक्षहरुले पनि सबै लाई खबर गर्न पठायौ ं भने र आफूले त्यो ले वलका साथीहरुलाई नबो लाउने के ही कमजो री पनि भएका छन् । वडाले हामीलाई बो लाएन भने र तुस सा“ध्ने काम पनि भएका छन् । त्यसै ले यस् ता गुनासा आउने गरे का छन् । यसलाई हामीले सुधार गरे र लै जान्छौ ं ।
एउटै मान्छे वषौर् ंसाल उपभो क्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने प्रवृत्ति छ, उपभो क्ता समितिको ठे के दारी कहिले रो क्नुहुन्छ ?
मै ले पनि यस्ता समस्या झे ले को छु । आउदा दिनमा मै ले सुधार गरे र अघि बढ्ने छु । त्यसका लागि गत सालको गाउसभाबाट छानिएका यो जना र ती यो जना कार्यान्वयनका लागि गठन भएका उपभो क्ता समितिको फे हरिस्त हामीसग छ । ती उपभो क्ता समितिहरुलाई तालिम दिने काम हामीले गरे का छौ ं र आगामी दिनमा आउने समितिहरुलाई पनि यो जनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनः तालिम दिने व्यवस् था गरे का छौ ं । त्यसै ले अब समस् या पनि पदैर् न र आउदो वर्षदे खि उपभो क्ता समिति गठन गर्दा पुरानो लिष्ट हे रे र काम अघि बढाउने छौ ं । के ही आइहाल्लान् ठ्याप्पै रो क्न त अहिले नै सकिदै न हो ला । कतिपय ठाउ“मा अगुवाइ गनेर् हरुको पनि कमी छ । तर यस् तो प्रवृत्तिलाई पूर्णतया रो क्ने प्रयास गनेर् छौ ं । नया उपभो क्ता समिति गठन गर्दा परिपत्र नै गरे र पुरानालाई कम प्राथमिकता दिनु भने र सजग गराउने काम हामीले गछौर् ं । समस्या के भयो त भन्दा जनप्रतिनिधि नहु“दाको विगतमा दलहरुबाटै आफ्ना मान्छे राख्ने काम भएकाले अहिले आफू आउन नपाएपछि तीनै मान्छे हरुले हामीमाथि आरो प लगाउने काम गरिरहे का छन् ।
अहिले पनि एउटा यो जना फरफारक गर्दा महिनौ ं धाउने अवस्था त दलहरुले ल्याएका हो इनन् हो ला ?
त्यस्तो हो इन । समस् या छ । यसलाई कसरी निराकरण गनेर् र काममा सरलता ल्याउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो  । त्यही सहजताका लागि हामीले उपभो क्ता समितिलाई तालिम दिएका हौ ं । अहिले पनि भुक्तानी लिन आउदा कागजपत्र मिले को दे खिदै न । कागजपत्र नमिल्दा मिले न मिलाएर ल्याउनुस् त भन्नु प¥यो नि । समस्या के छ भने गाउ“पालिकामा एकजना मात्रै ले खापाल हुनुहुन्छ । कहिले बिरामी हुने अवस् था हुन्छ । गाउ“पालिकामा ३२ वटा विद्यालय छन् । तिनको खर्च व्यवस् थापन यहींबाट गर्नुपर्छ । कामको लो डले पनि भने को बे ला काम हुन नसके को हो ला । त्यसै ले हामीले अबदे खि उपभो क्ता समितिले वडाबाटै कागजपत्र, विल भरपाई मिलाएर ल्याउने व्यवस् था मिलाएका छौ ं । के के कुरा पुगे न अब वडाबाटै हे रे र भुक्तानीका लागि गाउ“पालिकामा सिफारिस गनेर् परिपाटीको विकास गरे का छौ ं । अब त्यस् तो समस् या आउ“दै न । यदि ठूलै भीड लाग्ने अवस् था आयो भने पालो गरे र हामीले फरफारक गनेर् व्यवस् था गछौर् ं । अहिले त कर्मचारी पनि बढाएका छौ ं ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजे ट ल्याउनुभयो । प्राथमिकता के हो गाउपालिकाको ?
नीति कार्यक्रम र बजे टको प्राथमिकता शिक्षा नै हो  । हामीले शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, समृद्धिको आधार भन्ने नारा तय गरे का छौ ं । नया“ बजे टमा हामीले कुल बजे टको २० प्रतिशत बजे ट शिक्षामा
छुट्याएका छांै  । हामीले शिक्षा नीतिको मस् यौ दा पनि तयार गरे का छौ ं । शिक्षाले नै सबै थो कको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने गाउ“पालिकाको ठहर छ । अहिले गाउ पालिकाभित्रका विद्यालयमा गुणस् तरीय र सा“च्चिकै निःशुल्क शिक्षा कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ बढी के न्द्रिय भएका छौ ं । गुणस् तरीय र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने यस ठाउको विकास सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागे को छ । त्यसै ले यस क्षे त्रका सरकारी तथा गै रसरकारी विद्यालयमा गुणस् तरीय शिक्षाका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजे टलाई बढी फो कस गरे का छौ ं ।
गाउपालिकाका अन्य प्राथमिकताका विषय के ही छन् ?
अवश्य पनि । हामीले गाउ“पालिकाको गुरुयो जना तयार गदैर् छौ ं । खासगरी गाउ“पालिकाभित्रका विभिन्न क्षे त्रलाई वर्गीकरण गनेर् तयारी गरे का छौ ं । हामीले गाउ“पालिकामा औ द्यो गिक क्षे त्र, कृषि उत्पादन क्षे त्र, आवास तथा शहरी क्षे त्रको निर्धारण गनेर् यो जनामा छौ ं । जस् तो कृषि क्षे त्रका लागि वडा नं. २ दे खि ५ नं. वडाका सडकदे खि उत्तर क्षे त्रका भागलाई कृषि क्षे त्रको रुपमा विकास गनेर् , वडा नं. १ लाई औ द्यो गिक क्षे त्रका रुपमा विकास गनेर् , त्यस् तै वडा नं. ६, ७ र ८ लाई व्यापारिक के न्द्रको रुपमा विकास गनेर् , त्यस् तै आवास क्षे त्रको रुपमा छुट्टै क्षे त्र निर्धारण गनेर् गरी काम थाले का छौ ं । को इलावास बजारलाई व्यापारिक के न्द्रको रुपमा स् थापित गनेर् र त्यसका लागि आवश्यक पनेर् पूर्वाधार विकासका लागि काम पनि थालिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा गाउ“पालिकालाई कस् तो बनाउने सपना छ ?
दाङकै नमूना गाउ“पालिकाको रुपमा स्थापित गनेर् नै हो  । कृषिका लागि बड्कापथ सिंचाई आयो जनालाई विकास गर्न सकियो भने यहा“को कृषि सिंचाईलाई टे वा पुग्ने छ । को इलावास नाकालाई भन्सार नाकाको रुपमा स् थापित गर्न सकियो भने व्यावसायिक के न्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यस् तै कालाकाटे क्षे त्रलाई औ द्यो गिक क्षे त्रको रुपमा विकास गर्न सकियो भने बे रो जगारीपनलाई घटाउन सकिने छ । त्यस् तै यहा“ प्राविधिक धारको शै क्षिक के न्द्र बनाउन गढवा क्याम्पसलाई विकास गर्न सकिने छ । अहिले दे खि अलि नया किसिमको व्यवसायको शुरुवात गरिएको छ । यस वर्षदे खि रे शम खे ती शुरु गरिएको छ । राप्ती कटानलाई व्यवस् िथत गर्न सकियो भने भूमिहीन किसानहरुको व्यवस् थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सडक विस् तर र स् तरो न्नति, कालो पत्रे गर्न सकियो भने त्यसले बहुआयामिक विकास ल्याउने छ भन्ने आशा हामीले गरे का छौ ं ।
Previous: सर्वोदयमा आजीवन सदस्य विस्तार गर्न उपसमिति
Next: वासस्थान पुरिदा राप्तीका माछा संकटमा